Padaethar - Page 218 of 227 -
နာမညျမှာ “သ´´ ပါတဲ့သူတှရေဲ့အကွောငျ
May 5, 2020 by Padaethar
နာမညျမှာ “သ´´ ပါတဲ့သူတှေ စိတျကွီးတယျ….. ဒေါသဖွဈလာရငျ ဘယျသူကိုမှဘယျအရာကိုမှ ထညျ့မစဉျးစားဘူးထညျ့လဲ မတှကျတတျဘူး ဒါပမေယျ့​ ပွောပီး လုပျပီးသှားလို့သူမှားနတေဲ့ကိစ်စကိုလဲပွနျတောငျးပနျဖို့ဝနျမလေးတတျကွဘူး စိတျနာအောငျတော့ လာမလုပျနဲ့​သတေဲ့အထိ မှတျထားတတျတယျအငွိုးအတေးလဲ ကွီးတယျ အပျေါယံခငျမငျတာ မလိုလားဘူးသူငယျခငျြး အစဈပဲ လိုခငျြကွတယျ ယောငျလို့​တောငျနာမညျမှာ`သ´ပါတဲ့သူကိုအရှဲ့မတိုကျမိစနေဲ့သူမြားတှေ ရှဲ့တာထကျအဆပေါငျးမြားစှာ ပွနျရှဲ့တတျတယျ သနားအောငျပွောလာရငျအိတျထဲရှိတဲ့ ပိုကျဆံကိုယျ​ မသုံးရရငျ နပေါစေ​ပေးပွဈတတျတယျ မပေးခငျြဘူး ကွညျ့မရဘူးဆိုရငျအဲ့လူဘာဖွဈနပေါစလှေညျ့ကို မကွညျ့တော့ဘူး လိမျတာ ညာတာ အရမျးမုနျးတယျဒါပမေဲ့ သူငယျခငျြးမြား အပျေါမှာ​တော့ ဟာသတှေ ရယျစရာတှပွေောပွီးစနောကျတတျကွတယျ အနအေေးတယျတခွားသူတှကေိုဆို ပွုံးပွဖို့ မပွောနဲ့မကျြနှာထားက ခပျတညျတညျနဲ့တလောကလုံးသူ့လုပျစာ စားနကွေတဲ့အတိုငျးပဲ ဘာပဲလုပျလုပျအမြားအတှကျပဲ ကွညျ့တတျတယျတဈကိုယျကောငျး မဆနျတတျကွဘူး ဒါပမေဲ့ မထငျရငျ မထငျသလိုလညျး​ပွောတတျတဲ့ အကငျြ့ကလညျး ရှိသေး​ပွောရမယျဆိုနာမညျမှာ`သ´ပါတဲ့သူတှဟောမဟုတျမခံ ပေါငျးရသငျးရခကျပွီးစိတျသဘောထားကောငျးတဲ့လူ့ဂှစာကွီးတှပေေါ့ဗြာ ၊၊ မှနျနတေယျဆိုရငျ ရှယျသှားလိုကျကွနျော credit နာမည်မှာ … Read more
သာမညတောငျ ဆရာတျောဘုရားကွီး ခြီးမွငျ့သော ခမျြးသာခငျြလြှငျ ရှတျရမညျ့ဂါထာ
အမှုအခင်းရှိလျှင်၊ပစ္စည်းပျောက်လျှင်၊နေထိုင်မကောင်းလျှင်၊ချမ်းသာချင်လျှင်၊စစ်တိုက်သွားလျှင် ရွတ်ရမည့် ဂါထာ သာမညတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးချီးမြင့်သောဂါထာ…. ဥုံ- သိဒ္ဓိဘုရားထိပ္မွာထား…. နားမျွာဗဟ္မာ ၊ လက္မွာ သိကြား ၊ ခါးမွာ ဘီလူး ၊ ဒူးမျွာခေင်္သ့ ၊ျေခမွာ နဂါး ၊ ကိုယ်မှာ ဂဠုန်၊ အစောင့်ထားပါ၏ ။ ဥုံ – ကောက္ကုသံ ၊ ဥုံ – ကောဏဂုံ ၊ ဥုံ- ကဿဖ ၊ ဥုံ – ဂေါတမ ၊ ဥုံ – အရိမေတ္တယျ ၊ ဥုံ – ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ပါ၏ ။ ဓာတ်တော်ဝင် ၊ မဟာဝင် ၊ ဧရာဝင် ၊ … Read more
ရိုးသားတဲ့တောငျသူတှကေို ဖုနျးနဲ့လိမျနတေဲ့ လိမျနညျးအသဈ ရုပ်သံ(သိအောငျကွညျ့ထားကွပါ)
ရိုးသားတဲ့တောင်သူတွေကို ဖုန်းနဲ့လိမ်နေတဲ့ လိမ်နည်းအသစ် ရုပ်သံ(သိအောင်ကြည့်ထားကြပါ) မြန်မာပြည်မှာ အလှူခံပြီးလိမ်တယ် ၊ နွမ်းပါးသလို ဟန်ဆောင်ပြီးလိမ်တယ်၊ ပစ္စည်းရောင်းသလိုနဲ့ လိမ်တယ် ။ လိမ်နည်းမျိုးတွေစုံလာချိန်မှာတော့ နောက်ထပ် လိမ်နည်းအသစ်တစ်ခုနဲ့ လိမ်နေကြပါပြီ။ဒီအကြောင်းကို အားလုံး သိရအောင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ တယ်လီနောက မဲပေါက်တယ်ဆို ပြီး ဖုန်းယူမလား ၊ ငွေယူမလား ဆိုပြီး မေးပါတယ်။ ငွေယူမယ်ပြောရင် Wave Money ကနေ ငွေအလွှဲပြပါတယ်။ ပက်စဝက်ခံထားပါတယ်။ အလိမ်ခံရမယ့်သူက ငွေလည်းမြင်ရော လောဘတက်ပြီး သူတို့ခိုင်းတာလုပ်တော့တာပါ ငွေလွှဲပြပြီးတော့ ပိုက်ဆံ wave money နဲ့ လွှဲခိုင်းပါတယ်။ လုံးဝ မလွှဲပါနဲ့။ လွှဲတာနဲ့ အဲ့ပိုက်ဆံကို ထုတ်ယူပြီး သူတို့လွှဲထားတဲ့ ပိုက်ဆံကိုလည်း ပြန်ယူသွားမှာပါ။လူလိမ်တွေပါ။ ရိုးသားပြီး မသိတဲ့ တောသူတောင်သားတွေကို … Read more
အဆိုးတစ်ခု ကြုံရတိုင်း ကောင်းတာ တစ်ခု ထလုပ်ပါ…
အဆိုးတစ်ခု ကြုံရတိုင်း အကောင်းတစ်ခု ထလုပ်ပါ။ လောကကြီးက ကိုယ်မွေးလာမယ်မှန်းသိလို့ ကိုယ့်အလိုအတိုင်းဖြစ်ဖို့ စောင့်နေလို့ ကိုယ်က မွေးဖွားလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိတဲ့ လောကကြီးထဲ ကိုယ်က မွေးလာရတာ။ ကိုယ့်ကို မွေးလိုက်တဲ့ ကိုယ့်မိဘတွေတောင် ချို့ယွင်းချက်တွေ အများကြီးနဲ့ ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက ဘယ်အရာမဆို ဘယ်သူမဆို အကောင်းအဆိုး ရောနေ တတ်တယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောပေါ့။ ဘဝဟာလည်း အကောင်းရော အဆိုးရော ရောနေတယ်။ တချို့အဆိုးတွေက ရှောင်ရင်ရတယ်။ တချို့အဆိုးတွေက ရှောင်လို့မရဘူး။ ရှောင်လို့မရတဲ့ အဆိုးတွေကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အရိုးဆုံး အရှင်းဆုံးအဖြေ ရှိပါတယ်။ ဆိုးတာ တစ်ခုကြုံတိုင်း ကောင်းတာတစ်ခု ထလုပ်ပါ။ မကောင်းတာတစ်ခု စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာတစ်ခု စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာ ဝမ်းနည်းစရာ ဘာပဲကြုံရကြုံရ ဒီအတိုင်းမနေပါနဲ့။ သေးသေးမွှားမွှားလေး … Read more
သငျနတေဲ့ အိမျ (သို့) အခနျး မှာ ဒီအခကျြ တှရှေိနရေငျ အမွနျဆုံးပွငျလိုကျပါ
အရာရာတိုငျး၊ ပစ်စညျးတိုငျးမှာ စှမျးအငျတှေ ရှိနပေါတယျ။ သငျ့အိမျမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှထေဲမှာသငျ့အိမျကို လာဘျတိတျစသေလို၊သငျ့ကိုလညျး ဘုနျးကံနိမျ့စတေဲ့ ပစ်စညျးတှရှေိပါတယျ။ ဘာတှလေဲဆိုတာကိုတော့ကွညျ့ လိုကျပါနျော။ (၁)ရှုပျပှနခွေငျး သငျ့အိမျကိုရှုပျပှ ညဈပတျနအေောငျထားတာ၊ အမှိုကျတှေ၊ဖုနျတှမေရှငျးတာ ၊ပငျ့ကူ မြှငျတှမေရှငျးတာ၊ပနျးကနျတှေ မဆေးပဲ ပုံထားတာမြိုး၊ အဝတျအစားတှလေညျး သခြောမခေါကျပဲပွနျ့ကြဲရှုပျပှနတောမြိုးတှေ၊ ပစ်စညျးတှကေသူ့နရောနဲ့သူရှိမနပေဲ ရှုပျပှညဈပတျနတောမြိုးတှကေ သငျ့အိမျကိုလာဘျတိတျစသေလို၊ ဘုနျးကံနိမျ့စပေါတယျ။ (၂)အနံ့ အသကျဆိုးခွငျး သငျ့အိမျကလထေု ကလညျးသငျ့အပျေါကိုအမြားကွီးသကျရောကျနိုငျပါတယျ။ သငျ့အိမျမှာ အနံ့အသကျတှေ မကောငျးတာ၊အဝတျအစားမှိုစျောတှနေံနတော ဒါမှမဟုတျအမှိုကျနံ့တှနေဲ့တခွားမကောငျးတဲ့အနံ့တှအေားလုံးဟာသငျ့အိမျကိုလာဘျတိတျစပွေီးဘုနျးကံနိမျ့စတောကွောငျ့သငျ့အိမျပွတငျးပေါကျတှကေို ဖှငျ့ပွီးလကေောငျးလသေနျ့ ရအောငျ လုပျတာ၊ အမှေးနံ့တှဖွေနျးပေးတာမြိုးတှကေို အမွဲတမျးလုပျပေးသငျ့ပါတ ယျ။ (၃)ပစ်စညျးအပကျြတှေ ထားခွငျး သငျ့အိမျမှာအကျနတေဲ့ မှနျတှေ၊ ကြိုးနတေဲ့ခြိတျတှေ၊အကငြ်္ီအပွဲတှကေအစ မထားသငျ့ပါဘူး။ ဒီလိုမကောငျးတော့တဲ့ အရာတှကေို ဆကျလကျသိမျးထားတာဟာအိမျကို လာဘျတိတျစတေဲ့အပွငျ ဘုနျးကံကိုလညျးနိမျ့စနေိုငျလို့ပါ။ (၄)ဘုရားတရား မလုပျခွငျး သငျ့အိမျမှာ သငျကိုးကှယျရာ ဘာ … Read more
မနက်ဖြန် (6.5.2020)ကဆုန်လပြည့်နေ့ တွင်သာပြုလုပ်ရမယ့် ကံပွင့် ကံမြှင့်စေရန် ဂါထာနှင့် ယတြာ
(6.5.2020)ကဆုန်လပြည့်နေ့ တွင်သာပြုလုပ်ရမယ့် ကံပွင့် ကံမြှင့်စေရန် ဂါထာနှင့် ယတြာ လပြည့်နေ့ ည ၉နာရီ လမင်းကြီးကို ကြည့်၍ ၄၅ခေါက်၇ွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ လပြည့်နေ့ ည ၉နာရီ လမင်းကြီးကို ကြည့်၍ ၄၅ခေါက်၇ွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ နှင်းဆီပန်း(၅)ပွင့် သပြေပန်း(၅)ခက် လမုန့်(၅)ခုတို့အား လင်ဗန်းတစ်ချပ်ထဲတွင်လှပအောင်ပြင်ဆင်၍ထည့်ပြီး ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် |အမွေးတိုင်(၅)တိုင်|သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်စီကိုလည်း ဘုရားရှင်အားဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးအား ရည်စူးကပ်လှူပူဇော်ရင်း အောက်ပါအတိုင်း လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေးပါ `ဘုရားရှင်အမှူးရှိသော အနန္တငါးပါးအားရည်မှန်း၍ ရည်စူး၍ နှင်းဆီပန်း (၅)ပွင့်တိုဖြင့်လည်းကောင်း| သပြေပန်း(၅)ခက်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း| လမုန့်(၅)ခုတို့ဖြင့်လည်းကောင်း| ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း| အမွေးတိုင်(၅)တိုင်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း| ရေတော်(၅)ခွက်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ကပ်လှူပူဇော်ကန်တော့ပါ၏ ဤသစ္စာမှန်ကန်ပါက| ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်လည်းကောင်း| ဤမှန်သောသစ္စာတန်ခိုးကြောင့်သော်လည်းကောင်း| အရပ်လေးမျက်နှာ| အရပ်ရှစ်မျက်နှာ| အရပ်ဆယ်မျက်နှာတို့မှ ငွေကြေး|စည်းစိမ်ဥစ္စာ| ရတနာများစွာတို့သည်လည်းကောင်း| စိန်ရွှေရတနာ| ကျောက်မျက်ရတနာများစွာတို့သည်လည်းကောင်း |အလုပ်အကိုင်| … Read more
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ရအောင်ယူနည်း…
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ရအောင်ယူနည်း (၁) “ဒါနကုသိုလ်” မနက်အိပ်ယာထမျက်နှာသစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရေဖလားထဲကို ရေထည့်လိုက်ပါ။ မျက်စိနဲ့မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်တော့ မမြှောက်လိုက်ပါနဲ့။ မေတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။ လက်ကကိုင်ထားတဲ့ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ၏ဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်ကို သနားချီးမြှောက်သောအားဖြင့် မျက်နှာသစ်တော်မူပါဘုရား” လို့ဆိုပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ (၂) “ဗုဒ္ဓနုသာတိကုသိုလ်” မြတ်စွာဘုရားမျက်နှာသစ်တော်ရေ အသုံးပြုနေတုန်းမှာ အရဟံကို အနက်(၃)ခုနဲ့ ပွါးလိုက်ပါ။ အရဟံ – ကိလေသာ မြူမှုန်ပင် ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၊ အရဟံ – ပူဇော်အထူးကို အထူးခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၊ အရဟံ – ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်မှာပင် မကောင်းမှုကို မပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ ဒါဆို ဗုဒ္ဓနုသာတိကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ (၃) … Read more
ကိုရိုနာရောဂါ ပျောက်ကင်းပြီး ပြန်ဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များ ပြောကြား…
May 4, 2020 by Padaethar
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ပေးနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ဟာ ဆိုရင် ကမ္ဘာမြေက ဘယ်အချိန်မှ ချုပ်ငြိမ်းမလဲဆိုတာကို မည်သည့် ပညာရှင်မှ မခန့်မှန်းနိုင်ကြဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အမူအကျင့် လက္ခဏာတွေဟာ တည်ငြိမ်မှုမရှိပဲနဲ့ ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့လည်း ခန့်မှန်းရခက်နေကြပါတယ် အထူးသဖြင့် ရောဂါပိုးဟာ တိုက်ဖျက်တဲ့ဆေး မရှိပေမယ့်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့ တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်း ရောဂါကူးစက်ပေမယ့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သူတွေလည်း အများအပြားရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်လည်း လက်ရှိမှာ ဖြစ်ပွားသူရဲ့ ၅ ပုံ တစ်ပုံ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လို့ ဆေးရုံဆင်းကြသူများလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်း ရောဂါပျောက်ပြီဆိုတဲ့လူတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ပြန်လည်တွေ့ခဲ့ချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သုတေသနဆေးပညာရှင်တွေကို ခေါင်းကိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ် Positive ပြန်ဖြစ်တာလဲ။ဒီအဖြေကို အားလုံးက မှန်းဆချက်တွေမျိုးစုံနဲ့သာ ဒွိဟဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒီအတွက် Call … Read more
ဗိုက်ဆာလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လာတောင်းစားတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေ့ခိုင်းလိုက်သောအခါ…
တစ်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး စားစရာ လာတောင်းစားတယ်။ အဲ့မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့တိုးတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဆီမှာ စားစရာတောင်းတယ်။ ဆရာတော်က ဆွမ်းစားဆောင်ရှေ့ကအုတ်ပုံကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး “ဒကာတော် အဲ့ဒီအုတ်ပုံကို ဆွမ်းစားဆောင်နောက် အရင်ရွေ့ပေးပါအုန်း” လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ အဲ့တော့ လက်ပြတ် သူတောင်းစားက ဘုန်းကြီးကို မကျေမနပ်နဲ့ ပြောပါတယ်။ “အရှင်ဘုရား တပည့်တော်မှာ လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအုပ်ပုံကိုရွေ့နိုင်မှာလဲ အရှင်ဘုရား ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန်လေးတောင် မစွန့်ပေးချင်လဲနေပါ။ တပည့်တော် တစ်ခြားမှာပဲ သွားတောင်းစားတော့မယ်” လို့ပြောရော ဘုန်းကြီးက ဘာမှပြန်မပြောဘူး။ အုတ်ပုံဆီ လျှောက်သွားပြီး လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ အုတ်ခဲကို မ ပြီး ဆွမ်းစားဆောင် နောက်မှာသွားချတယ် ပြီးတော့မှ လေသံအေးအေးနဲ့ ပြောတာ “ဒီလိုအလုပ်မျိုးက လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့လဲ လုပ်လို့ရတယ်”။ လက်တစ်ဖက်ပြတ် … Read more
ဒုတိယလှိုင်းကို ကြုံရနိုင်ခြေရှိတဲ့ မြန်မာပြည် အခြေအနေနှင့် ကိုဗစ် တကျော့ ပြန်မလာစေရန်…
ဒုတိယလှိုင်း ကို ကြုံရနိုင်ခြေရှိ တဲ့ မြန်မာပြည် အခြေအနေနှ င့် ကို ဗစ် တကျော့ ပြန်မလာေ စရန် မြန်မာပြည်တွင် ၂ ရက်အတွင်း ပိုးတွေ့သူ ၁၀ ဦးအထိ ပြန်လည်များပြားလာခဲ့ပီဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ် ပိုးစတွေ့ပီးနောက် ကူးစက်သူများ တရိပ်ရိပ်တက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျနော် ထိုစဉ်က ရေးခဲ့သလိုပင် သင်္ကြန်အချိန်အခါသည် မြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ အင်းစိန်မှ စတင်ပီး ကူးစက်မှုများလာချိန်မှာပင် သင်္ကြန်ပိတ်ရက် ၁၀ ရက်ရောက်ရှိလာသည်။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့အထိ ကူးစက်သူများခဲ့ပီး တနေ့ ၂၀ ကျော်ထိ တွေ့ရှိလာစဉ်မှာပင် မြန်မာပြည်သူများ အိမ်ထဲမှာ တပတ်လောက် နေလိုက်ကြသည်။ အမောင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်သည်လဲ အိမ်ထဲပုန်းနေသော လူများကြောင့် မည်သူ့ကူးရမလဲ မသိပဲ ကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းသွားတော့သည်။ ထိုသင်္ကြန်ကာလက အကျိုးကို … Read more
← Previous Page1 … Page217 Page218 Page219 … Page227 Next →
သူကြောင့် ဒီလိုတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို သင်အရူးအမူးစွဲလန်းနေမိပါပြီ December 3, 2020
လာမယ့် (၂၀၂၁)ခုနှစ်မှာ ရာသီခွင်ပေါ်မူတည်ပြီး လမ်းခွဲရနိုင်ခြေရှိတဲ့ စုံတွဲ (၄) တွဲ December 3, 2020
အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက်(၆)ချက် December 3, 2020
ယောက်ျားလေးတွေအမြင်မှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လှနေစေမယ့် အချက်(၅)ချက် December 3, 2020
သင့်တန်ဖိုးကို သင့်ချစ်သူနားလည်စေဖို့ သင့်ဖက်က မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့်အရာ (၅) ခု December 3, 2020
ခံတွင်းနံ့ဆိုးတွေကြောင့် လူအများကြားမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ကျမသွားစေဖို့အတွက် December 3, 2020
သင့်အပေါ် သစ္စာဖောက်နေတာကို ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း( ၅ )ချက် December 3, 2020